Umaka: RSS | Martech Zone
I-RSS ne-imeyili: Ukubuka Kokumaketha
NgoLwesibili, ngoJulayi 24, i-2007 NgoLwesine, Januwari 5, 2017 Douglas Karr
Kuyingxoxo eguga, kepha ngokufika kwe-Outlook 2007 ukwesekwa kwe-RSS - imboni eku-inthanethi iyaqhubeka nokwenza ukuqhathanisa phakathi kwe-RSS ne-imeyili ye-Intanethi Yezokuxhumana Kwe-inthanethi (nge-SMS khona lapho). Ngokombono wokuphathwa kokuqukethwe, abantu abaningi beMboni bacabanga ngakho konke lokhu njengezinhlobo 'zokuphuma'. Lowo ngumbono wokungazi ngempela. Kufana nokubheka i-Direct Mail ne-Bulletin Board okufanayo ngoba wena
I-Blog-Tipping: Iposi Elizimele
NgoMsombuluko, Julayi 9, 2007 NgoLwesine, ngo-Okthoba 23, 2014 Douglas Karr
I-tippee yami elandelayo nguRyan ophethe ibhulogi yezamabhizinisi, ebizwa nge-The Self Reliant Post. I-Self-Reliant Post iyibhulogi yokuthi ungayenza kanjani imali ngebhizinisi lasekhaya eliku-inthanethi neminye imicabango ehlobene nalo. (Ngihlwithe lowo musho wokugcina ekhasini Elimayelana.) Nawa Amathiphu akho weBhulogi: Doh! Ingabe ngivele ngagaxekile? Lapho ngiqala ukubona igama lesizinda ngawo wonke lawo mahedeni, lowo umcabango wokuqala owangishaya.
ULwesithathu, April 25, 2007 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 Douglas Karr
Ngenkathi abantu bekwazi ukubuka i-HTML, ukuze amapulatifomu wesoftware asebenzise okuqukethwe, kufanele kube ngefomethi efundekayo. Ifomethi okuyi-inthanethi ejwayelekile yi-RSS futhi uma ushicilela okuthunyelwe kwakho kwakamuva ngale ndlela, kubizwa ngokuthi okuphakelayo kwakho. Ngeplatifomu efana ne-WordPress, okuphakelayo kwakho kwenziwa ngokuzenzakalela futhi akudingeki wenze lutho. Cabanga ukuthi ungakhipha zonke izinto zokwakhiwa kwesayithi lakho bese ufunza nje